किन आलियाको विवाह हुन दिँदैनन् महेश भट्ट ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियकिन आलियाको विवाह हुन दिँदैनन् महेश भट्ट ?
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट र रणवीर कपूरको विवाहको चर्चा पछिल्लो समय धेरै हुने गरेको छ । उनीहरुले कहिले विवाह गर्दैछन् भनेर धेरै चा’सो पनि लिने गरेका छन् । तर, एक अन्तरवार्तामा आलियाले आफ्ना पिता महेश भट्ट अहिले नै उनको विवाह गर्ने म’नस्थितीमा नभएको बताएकी छन् ।
उनले पिताले आफूलाई छिट्टै टाढा बनाउन नचाहेको पनि बताएकी छन् । उनले भनिन्, “मेरो बुवालाई मेरो धेरै नै चि’न्ता छ । उहाँको चाहाना त मेरो विवाह नै नहोस् भन्ने हो ।” उनले आफ्ना पिताले विवाहको कुरा गर्दा आफूलाई बा’थरु’ममा ब’न्द गर्ने ध’म्की दिने गरेको पनि सुनाइन् ।
उनले भनिन्, “विवाहको कुरा गर्दा बुवाले मलाई बा’थरु’ममा थु’निदि’ने ध’म्की दिनुहुन्छ । तर आफ्नो न’जरबाट गराउन न’चाहाने बताउँनुहुन्छ ।”पि’ताले छोरी टाढा हुने ड’रले विवाह गर्न नदिएको आ’लियाले अगाडि खु’लाइन् । एजेन्सी